यस्ता भिडियो युट्युवमा र फेसवुकमा हालेर दुःख दिने २ जना पक्राउ – PathivaraOnline
Home > समाचार > यस्ता भिडियो युट्युवमा र फेसवुकमा हालेर दुःख दिने २ जना पक्राउ
Poonam June 15, 2021 June 15, 2021 समाचार	0
काठमाडौ । युट्युव, फेसवुक लगायत सामाजिक सञ्जालमा अ श्लि ल तस्बिर र भिडियो बनाएर सार्वजनिक गर्ने २ जना पक्राउ गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालको दु रुपयो ग गरी च रित्र हर ण गरेको अ भि योगमा प्रहरीले दुई जनालाई प क्राउ गरेको हो ।
साइबर ब्युरोबाट गएको प्रहरी टोलीले उनीहरुलाई प क्रा उ गरेको जनाएको छ । प क्रा उ पर्नेहरूमा काठमाडौं महानगरपालिका–१७ डल्लु बस्ने २६ वर्षीय सानु पोडे र बागलुङ, बागलुङ नगरपालिका–८ सिगाना बस्ने ५२ वर्षीय रामेन्द्र खड्का रहेका छन् ।
प क्रा उमध्ये पोडेलले नाबालिकाको फेसबुक म्यासेन्जरमा पटक–पटक अ श्ली ल भिडियो पठाउने गरेको खुलेको छ । उनीहरुको अनुहारमा नचिनेका ब्यक्तिको शरिर मिलाएर फोटो र भिडियो तयार पारेर अनावश्यक त ना व दिएको पनि प्रहरीले जनाएको छ । बालिकाहरुलाई त्यस्ता भिडियो र तस्बिर देखाएर उनीहरुको मनमा ड र उ त्पन्न गराएको प्रहरीले जनाएको छ ।
बालिकाहरुलाई दुख दिने र च रित्र हर ण गर्ने काम गरेका उनीहरुलाई प क्राउ गरी कारवाही सुरु गरिएको छ । पक्राउ परेका खड्काले भने सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, टिकटक, यूट्युब लगायतमा व्यक्तिहरूको तस्बिर र भिडियो दु रु प योग गर्दै फोटोसप, मल्टिलेट गरेको पाइएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङको सहयोगमा ब्यु रो बाट गएको प्रहरीले उनलाई प क्राउ गरेको बताइएको छ । उनीहरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ७ दिनको म्याद अनुमति लिई आवश्यक अ नु सन्धान भइरहेको ब्यु रो ले जनाएको छ ।
आइतवार मृत्यु घोषणा गरिएका विश्वकै ठूलो परिवारका मुखिया जिओना जिवितै ? अन्तिम संस्कार रोकियो
अन्ततः पत्ता लाग्यो उर्लाबारीका प्रविणको निधनकाे कारण!
जीप कर्णाली नदीमा खस्यो, ४ जनाको घटनास्थलमै सकियो जिन्दगी !